Igwe embossing, igwe mkpuchi akpukpo PVC - Zhongshuo
A na-etinyere CPL tumadi maka iwepu obere ntụpọ na mkpuchi mpịakọta SS na mmiri, nweta ngwụcha ịchọ mma, ntụgharị No.3, No.4, HL, SB & Duplo. Na coolant nwere ike ịbụ emulsion ma ọ bụ ịnweta mmanụ. Sisọcha nhịcha na usoro nhichagharị dị mkpa maka ahịrị zuru oke. Ezubere ZS CPL maka eriri mpịakọta oyi ka ọ ga - arụ ọrụ site na nha 100 ruo 1600 mm na ọkpụrụkpụ n'etiti 0.4 ruo 3.0 mm.
Wuxi Zhongshuo igwe
Itu Gi n’agha n’iru uzo.
Site na ịhọrọ ma hazie ikike
Ngwa maka ọrụ gị iji nyere gị aka ịkwado ego ịzụta nke na-eweta uru pụtara ìhè.
A na-etinye CPL tumadi maka t ...
Mpempe akwụkwọ akpaaka zuru ezu nye She ...
Ogwumagwa na Akpaaka zuru oke na ...
Eku ahụ bụ kọlụm 4 gantr ...
Igwe eji enyo enyo enyo maka igwe mpịakọta igwe mkpuchi ...
Chdị mpịakọta Ọ na-emetụta ...
Ntinye Scoth-Brite Roller ...
A na-eji igwe a…
Ọ mejupụtara gantry fra ...
Usoro sistemụ gụnyere: 2 pena ...
N'afọ 2005 anyị bidoro ibụpụta, ịkpụpụta ma chịkọta igwe na-akpụ igwe na igwe maka igwe. Site na mgbasawanye azụmahịa na-aga n'ihu na mgbanwe nke ndị na-eketa òkè, na afọ 2015, Wuxi Zhongshuo Machines Co., guzobere.
Companylọ ọrụ ahụ dị na Wuxi City, Jiangsu Province. Isi obodo edebanyere aha bụ nde 8 RMB. Mpaghara owuwu ihe karịrị 7000 m2. Onu ogugu nke ndi oru kariri iri isii, nke gunyere 1 injin inyocha, 2 ndi injinia di elu na ndi injin 5.
Igwe igwe eji agba akwa mmiri nke Wmth Wide nke 2m maka SS Heavy Plate
Febbọchị Mee / 15/2020
“Are bụ onye anyị tụkwasịrị obi kemgbe ogologo oge”: Wuxi Puxin Metal Products Co., Ltd nyere iwu ka igwe mgbawa maka nnukwu igwe anaghị agba nchara igwe nke Wuxi Zhongshuo MachZS Mach. 39, Qunxing Rd, Jan, 2020 - A na-enye nkwekọrịta ọhụụ: Na Jan , Nke iri, abiala nke China nke di…
Ọkpụkpọ olulu dị obosara dị mma maka ịgbanye akwa mpempe akwụkwọ titanium
"Ezigbo nnukwu eriri igwe na-agara agịga maka ịgbanye mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ" kwenyesiri ike: Onye ahịa ndị China nyere iwu ka mpempe akwụkwọ abụọ rụọ mpempe akwụkwọ sitere na Wuxi Zhongshuo Machines ZS No. 39, Qunxing Rd, Jan 3, 2020 - A na-enye nkwekọrịta ọhụụ: Na Dec, 13th 2019, a na-eduga na igwe na-acha odo odo titanium China gosipụtara na ya…
Kacha mma ịrụ ọrụ racing ngwaahịa ụwa dum
"Kacha ọnụ ahịa arụmọrụ racing ngwaahịa ụwa dum" kwenyesiri ike: onye ahịa orderedtali nyere iwu ka mpempe akwụkwọ akpaghị aka zuru oke na mpempe akwụkwọ nke Wuxi Zhongshuo Machines ZS No. 39, Qunxing Rd, Dec, 2019 - Nyere nkwekọrịta ọhụụ: Na Nov, 22nd, onye isi Servicelọ ọrụ igwe anaghị agba nchara nke steeltali, kwenye ...